Fantatrao ve: Inona moa ity Vatican ity?
jeudi, 28 mars 2019 09:57
Ny Vatican dia fanjakana (Etat), fa tsy pays ka hoe membre ONU.
Fanjakana tsy miankina amin'ny fanjakana Italianina, na ao anatin'ny Italia aza ny toerana misy azy ara-jeografika, nisy fifanarahana tamin'ny taona 1929 teo amin'ny fanjakana Italianina sy ny Eglise Catholique romaine, ny hitsanganan'ny Fanjakana Vatican (Etat de la cité du Vatican).
Tany kely indrindra maneran-tany izy raha fanjakana no jerena satria dia 0.49Km² fotsiny ny tany misy ny Cité du Vatican, ary mponina vitsy indrindra 800 (taona 2017).
Ireo Katolika maneran-tany kosa no mandrafitra izany fanjakana izany, sy ireo mpino Katolika efa mahoatra ny 1,228 miliara ny isan'ireo vita Batemy ny taona 2012.
Ny Papa no Filoham-panjakana no sady lehiben'ny Fiangonana Katolika.
Ireo Kardinaly 226 maneran-tany no mpiara-miasa akaiky aminy sady mpanola-tsaina. Anisan'izany ny antsika eto Madagasikara, ny Kardinaly Monseigneur Désiré Tsarahazana.
Manana ny ambasadaoriny maneran-tany ny Vatican, manana izany isika eto Madagascar, izay manana ny masoivohony ao Ivandry, Nonce apostolique no iantsoana azy, Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri no mitana izany toerana izany ankehitriny.
Amin'ny fandaharahana arofenitra, na protocole, dia ny Nonce hatrany, maneran-tany no antsoina hoe Zokiolona amin'ireo ambasadaoro rehetra misy eo amin'ny firenena iray.
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de première classe, no isokajiana ny Nonce, araky ny Congrès de Vienne (1815), izay namafisin'ny Convention de Vienne sur les relations diplomatiques tamin'ny 18 aprily 1961, fa ny Nonce no « doyen du corps diplomatique ».
Ka raha misy ny fandraisam-pitenena fisoloan-tena ny fivondronam-be iraisam-pirenena dia ny Zokiolona hatrany no miteny, ka ny Nonce, na zandriny ara-taona aza izy mihoatra amin'ireo ambasadaoro hafa, dia izy no mandray fitenenana misolotena ny rehetra.
Ny Fahatongavan'i Papa François eto amintsika ny 6-8 septembra 2019 izao izany dia fitsidihana ara-panjakana sy ara-pinoana, ka ny Filoham-pirenena Malagasy izany no mandray azy voalohany amin'ny maha filoham-panjakana ny Papa.
Rehefa izay vao manao ny programany amin'ny maha Filohan'ny Fiangonana Katolika azy izy.
Amin'ny fitsidihina toy itony, dia ny Fiangonana Katolika ao an-toerana, izany hoe ny eto Madagasikara no miantoka ny lany rehetra, ankoatran'izay programan'ny Fanjakana Malagasy, izay izy no miantoka an'izay.
Ny Fiarovana ny Papa, dia ny fanjakana Vatican no miantoka an'izay, izay hotronin'ny Fanjakana Malagasy ivahinihanany.
Manana saina manavaka azy ny Vatican, ny mavo sy fotsy, manana ny miaramilany, fa izy kosa tsy mitam-basy na fitaovam-piadiana.
Ireo mpiambina ny Papa kosa dia manana ny fitaovana rehetra iarovana Filoham-panjakana.
Inona no andrasana amin'ny fivahinianana toy itony, ary inona no mety tombotsoa na vokatra aorian'izay?
Ny Papa tsirairay dia samy manana ny firehany sy ny tiany hapetraka maneran-tany. I Papa François izao dia miezaka mafy ny ampitraka ireo firenena mahantra, fanarenana ny tsy mety ao anatin'ny Fiangonana Katolika, ara-diplomatika kosa dia miezaka amin'ny fifampanantonana tsy hisian'ny ady, indrindra fa ny fampanantonana ireo finoana samihafa maneran-tany, ny fanantonana ny Silamo, ny Orthodoxe, ho fampiraisana ny Fiangonana.
Ho antsika eto Madagasikara, dia azo antoka fa ny resaka ady amin'ny fahantrana no hiompanan'ny lahadinika, ny tanora, ireo voan'ny tsindry hazo lena.
Manao politika ve ny Papa, na ny Fiangonana Katolika?
Amin'ny maha fanjakana azy izay dia manao politika izy, ary mandresy lahatra filoham-panjakana hafa amin'ny fomba fijeriny. Tsy ny aha lasa Katolika ny Firenena iray akory no tanjony amin'izany, na ny haka fanjakana ka ho lasa mpitondra firenena, fa ny resaka fomba fijery.
Ohatra amin'izany, ny Katolika dia manohitra ny fanambadian'ny lahy samy lahy, ny vavy samy vavy. Manohitra ny famonoana olona, ny fanalan-jaza, ka izay lalàna mitondra amin'izany dia ezahiny ny andreseana azy amin'ny alalan'ireo fikambanana maro be ao anatin'ny finoana Katolika.
Tsy manohana mpitondra, na antoko politika ny Vatican, na ny Fiangonana Katolika. Eny na mety ho Katolika aza ny Filoham-pirenena amin'ny tany iray.
Iza no manomana ny fiavian'ny Papa?
Ny Fivondronam-ben'ny Eveka eto Madagasikara miaraka amin'ny Nonce apostolique no tompon'antoka voalohany amin'izany, ary hotronin'ny Fanjakana Malagasy.
Ny ratsamangaikan'ny Fiangonana Katolika no misahana ny rehetra avy eo, arak'izay fandaminana apetraka. Azo antoka fa misy Eveka iray anankinana ny momba izay.
Ahoana ireo finoana hafa amin'ny fahatongavan'i Papa?
Na dia fohy aza ny fotoana andalovany eto, dia azo antoka fa hiaona amin'ireo lehiben'ny Fiangoanana hafa ny Papa.
Andeha hitety Faritany ve ny Papa?
Hatreto mbola tsy voafaritra ny programa rehetra, fa raha ny nambara aloha dia eto Antananarivo no betsaka hisian'ny fihaonana, satria mbola ho atsy Maurice sy Mozambique ny Papa amin'io fotoana io.
Ahoana ny fananganana Olomasina ireo Olon-tsambatra eto Madagasikara, toa an'i Victoire Rasoamanarivo?
Nanambara ny Arsevakan'Antananarivo Monseigneur Odon Razanakolona, fa tsy tratra amin'izao diany izao izay fananganana ho Olomasina izay.
Toy ny fanomanana lehibe rehetra ataon'ny mpino Katolika dia entina am-bavaka manokana izany fahatongavan'i Papa sady Filoham-panjakana no Filohan'ny Fiangonana Katolika izany.